आज भदौ १० गते बुधबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
Homeराशिफलआज भदौ १० गते बुधबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
August 26, 2020 admin राशिफल 8325
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) कामहरु समय’मा नसकिने तथा अरुबाट बाधा ब्याबधान हुने हुनाले मानिसक तनाब बढ्ने छ । मनोबल कमजोर हुने हुना:ले काम गर्न जोस जा’गर हराएर जानेछ । पढाइ लेखाइ तपाईँ आफ्नै कारणले बिग्रने हुँदा अरुभन्दा पछि परिने छ । प्रेम प्रसंगबाट टाडै रहनुहोला प्रीय पात्रसँग मनमुटाव सिर्जना हुनेछ । खानपा’नमा ध्यान दिनु’होला सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउन सक्छ । बिधि बिधान तथा का’नुन सम्बत: काम ग’र्नुहोला दण्ड तथा जरिवाना हुने ग्रहयोग रहेकोछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) व्यापार व्याव’सायमा समय दिन नसक्दा घा’टा लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । माया प्रे’ममा धोका हुनेछ भने पति दाम्पत्य जी’वनमा घटपट आउँनेछ । समय तथा परिस्थिति अनुशार नचल्ना’ले दुख पाईनेछ । सामान्य स्वास्थमा समस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ । पढाई लेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताउँनेछ । स’वारी साध’नको प्रयोग गर्दा वा चलाउदा ध्यान दिनुहोला ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) व्यावसा’यमा लगानी बढाउदा मनग्गे लाभ हुनेछ । प्रतिष्ठित व्याक्तिसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु परेपनि अन्तत तपाईकै पक्षमा नतिजा आउदा मन खुसी हुनेछ । पढन पाठनमा अलि मन नजादा गृह कार्यहरु सम’यमा सकाउन मुस्कि’ल पर्नेछ । रमाईलो यात्रा हुनेछ भने आ’फन्त तथा शुभचिन्त’कसँगको भेटले उत्साह जगाउनेछ । प्रणय सम्बन्धमा बिश्वास बढेर जाने तथा बिबाह मार्फत सम्बन्धलाई लामो समय सम्म टि’काउन सकिनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) व्यापार व्याव’सायमा लगानि गरि सोचेजस्तो आम्दानी गर्न सकिनेछ । पढाई लेखाई अन्य दिन भन्दा सुधार हुने हुनाले आ’फन्त हरु खुसि हुनेछन् । माया प्रेममा सामिप्य:ता बढेर जानेछ भने परिवार तथा आत्मिय मि’त्रमा साथ रमाईलो यात्रा हुनेछ । सबैको स:हयोग पाईने हुनाले काम गर्न जोस जागर आउँनेछ । सामाजिक काममा दिन बित्ने हुँदा मन प्रश:न्न रहनेछ भने सबै’ले तपाईको क्षमताको कदर गर्नेछन् ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) माया प्रेममा अबिश्वास सिर्जना हुनेछ भने घर परि’वारमा आमा’सँग मनमुटाव उत्पन्न हुने’छ । अन्य काममा व्यस्त हुँदा पढाइ लेखाई कमजोर रहनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा समय लगानि गरे’पनि पद प्रतिष्ठा नपाईने हुनाले मन खिन्न हुनेछ । व्यापार व्याव’सायमा अरुदिन भन्दा ज्यादा समय खर्चिनु पर्नेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यावसा’यमा समय लगा’नि गर्नेहरुले भनेजस्तो आम्दानी गर्न सक्नेछन् ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) सानो प्रयत्नले रा’म्रो काम गरी फाईदा लिन सकि’नेछ भने प्रष्तिपर्धीहरु परास्त हुनेछन् । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । अध्ययन अध्यापनमा प्रगति गरि गन्तब्य भेटाउन सकिनेछ । दाजु’भाई तथा छिमेकीहरु’सँगको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ भने आफन्त सँग गरिने व्यापार व्यावसाय:बाट प्रशस्त आम्दानी हुने ग्रहयोग रहेकोछ । उत्पा:दित उद्योगमा लगानी बढाई भने जस्तो रुपैया पैसा कमाउँन सकिनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) व्यापार व्यापा’र फस्टाएर जाने हुनाले थप लगानि गर्ने वाताबरण बनेर जानेछ । कार्यक्षेत्रमा तपाईको निर्णयको उच्च सम्मान गरिनेछ भने बिशिष्ट व्यक्ति मार्फत सम्मान पाउने योग रहेकोछ । कुटु’म्बसँग मिलेर गरिने व्या’पार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । बिद्या तथा प्रतिस्प’र्धामा प्रष्तिपर्धीहरुलाई हराउदै अगा’डि बढ्न सकिनेछ । माया प्रेममा सामिप्यत बढ्नेछ भने पति पत्निबि’च मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) अध्ययन तथा अध्यापनमा मन जाने छैन भने स्वास्थ्य’मा भने कमजोरी अनुभव हुनेछ। सानातिना काममा अल्झनुपर्दा आफ्ना योजना समयमा सम्पाद’न नहुन सक्छन्। आशा देखाउनेहरूको भरपर्दा धोका पाइनेछ। चुनौतीपूर्ण कामको दायित्वले कठोर निर्णय गराउन सक्छ। अप्ठ्यारा परिस्थि’तिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। सफलता भने न्यून मात्र हातलागी हुनेछ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) व्यावसा’यबाट आम्दानी गर्न लगानी बढाउनु पर्ला । खर्च बढ्ने तथा कामहरु नहुने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । आर्थिक स्थिति खस्केर जाने हुनाले घरायसी खर्च व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे पर्नेछ । पढाइ लेखाइमा समय दिन नसक्दा पछि परिनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आई खर्च हुने योग रहेपनि छोटो दुरिको’ यात्रा हुने तथा विदेशी सामानको व्यापार व्यवा’साय फस्टाएर जानेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) व्यापार व्यावसायमा लगानि गरे पनि आम्दानी कम हुनेछ । नयाँ ठाउँबाट लगानीको प्रस्ताव आएपनि केहि सम:य कुर्नुनै पर्नेछ । ईच्छा आकाक्षाहरु पुरा गर्नको ला:गि बढि नै समय खर्चनु पर्ने हुन सक्छ । दाजुभाईसँग मनमुटाब सिर्जना हुने योग रहेकोछ । सामान्य स्यास्थ्य:मा समस्या आई रुपैया पैसा खर्च हुनेछ । माया प्रेममा सामान्य मनमुटाब सिर्जना हुनेछ भने आत्मिय मित्र तथा आ’फन्त सँग घरायसि कुरामा राज बाजिनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) व्यावसायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरि मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । माता पिताको धन तथा सम्पति प्र’योग गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । मा’या प्रेममा नजिक भई आफ्ना आफ्ना भावना साटासाट गर्न सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिष्पर्धामा प्रतिष्प’र्धिहरुलाई किनारा लगाउदै नतिजा ल्याउन सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा स’मर्थन प्राप्त हुने योग रहेकोछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) पढाइ लेखाइ बिद्यार्थिहरुले राम्रो प्रगति गर्ने समय रहेकोछ । धर्म तथा अध्या:त्म क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ भने मन्दिर तथा धार्मिक प्रतिष्ठान तिर गई टिका तथा प्र:साद ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । बन्द व्यापार फस्टा:एर जानेछ भने नया ठाउमा लगानी गर्ने बाता:बरण बन्नेछ । माया प्रेममा नजिक भई आफ्ना आवना साटासाट गर्ने अवसर जुर्नेछ । स:रकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईका सहभागिता उच्च स्तरको रहनेछ ।
भोली भदौ १० गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज मिति २०७८ साल बैशाख २९ गते बुधबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
May 12, 2021 admin राशिफल 4371
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) नजिकका आफन्त&जनहरु बिचको सम्बन्धमा सामान्य तिक्त’ता उत्पन्न हुन सक्नेछ । संचित रकम खर्चग’र्नुपर्ने सम्भाबना रहेकोछ । वाणीका कारण सामान्य बादविवादको झमेलामा फस्ने स&म्भाबना रहेकोछ
March 23, 2021 admin राशिफल 3657
June 19, 2021 admin राशिफल 3777
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) परीवारका सदस्य’हरु बाटँ टाढाँ भएको महसुस हुनेछ । शुभचिन्तक हरुको साथ सहयोगमा अधुरा कार्यहरु सम्पादन र’हनेछन । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिशेष साबाधानी अपनाउनु उत्तम
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (241978)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229881)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229510)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227885)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226680)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226257)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194278)